धन कमाउन मलेसिया गएका रोल्पाका एक युवा यसरि रातो बाकसमा फर्किए [भिडियो] ! – Ranga Pati
नियतिले भनौ वा भाग्यले भनौ नेपाली युवाहरुलाई परदेश पस्नै पर्ने छ । लाखौ युवाहरु यतिखेर सपनाको सहर खोज्दै काठमान्डौको अन्तरराष्ट्रिय त्रिभुवन विमानस्थलमा लाईन लागेका छन् । त्यहि एउटा बाटो भएर आउने जानेहरुको घुईचो छ । अलिकति आशा, अलिधेरै भावना बोकेर खाडी मुलुक उड्ने युवाहरुको ताँती छ ।
Posted on December 11, 2019 Author rangapati
पुरानो छापामार घर फर्के ?
Posted on September 26, 2019 September 26, 2019 Author rangapati
Posted on July 20, 2019 Author rangapati
चम्पारणको केसरियामा एक शिक्षकले मर्यादाको रेखा नाघेर पवित्र सम्बन्धलाई लज्जित बनाइदिएका छन् । त्यहाँको चाद पसरास्थित मध्य विद्यालयका प्रधान शिक्षकको यो कर्तुतले पुरै इलाका स्तब्ध बनेको छ ।शिक्षक रुपेश कुमार सिंहले आफ्नै विद्यालयकी एक नाबालिक छात्रालाई यौनसिकार बनाएका थिए । यो अवैध सम्बन्धको अश्लील भिडियो समेत लिक भएपछि भाइरलै बनेको छ ।यो घटना प्रमुख जिल्ला […]
साताको साप्ताहिक राशिफल : पौष ०६ गते आईतबारदेखी पौष १२ गते शनिबारसम्मको